Akwụkwọ ngosi Madrid. Akụkọ banyere otu ụbọchị | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 27/09/2021 12:00 | Emelitere ka 27/09/2021 12:22 | Ndị edemede, Ihe omume, Akwụkwọ, Noticias
Foto nke akụkọ a: (c) Mariola Díaz-Cano.
La Agba 80th nke Akwụkwọ ngosi Madrid emeela n'etiti Septemba 10 na 26. Mgbe afọ gara aga na -acha ọcha n'ihi ọrịa na -efe efe zuru ụwa ọnụ nke na -emetụta anyị, nhọpụta kwa afọ a na -atụ anya ya na akwụkwọ na ndị edemede n'isi obodo Spain jisiri ike ịlaghachi n'okpuru ikike ya. Ọ nọla n'ime ogige ya, ogige nke Retla ezumike nkáọ bụ ezie na na mbipute belatara nke ukwuu, mana enwere otu ihe ma ọ bụ karịa ihe ịga nke ọma ikekwe karịa n'oge ndị gara aga. Eletara m ya na 25th na nke a bụ akụkọ m.
1 Mbipụta 80 nke ngosi akwụkwọ ngosi Madrid
2 Akụkọ - FLM, 25/9/2021
2.1 Ahịrị ndị ọzọ
2.2 Ndị odee, ọnụ ọgụgụ na agwa ndị ọzọ
2.3 Mbinye aka m
2.4 Nkebi ahịrị
3 Ya mere ...
Mbipụta nke 80 nke Akwụkwọ ngosi Madrid
con Colombia dị ka mba obia, Ihe ngosi ahụ enwetala ike ma ọ bụ ihe ịga nke ọma. Ọ nọrọla na ọnụ ọgụgụ dị mma ọ bụghị naanị ndị ọbịa, ndị dechapụrụ ikike amachibidoro ọtụtụ oge, mana n'ịre ahịa, ma ọ bụ otu onye nchịkọta akụkọ gwara m ụnyaahụ, na ọnụnọ nnukwu aha n'akwụkwọ mba na nke mba ụwa oge ụfọdụ dịka, dịka ọmụmaatụ, Ịtali Federico Moccia.
Nwekwara Ụbọchị 17 nke mmemme, omume na mbinye aka. Site na imechi n'etiti ehihie, naanị ngwụcha izu gara aga ka emepere site na 10:30 ụtụtụ ruo 21:00 mgbede. Na spikes nke ogologo ahịrị ịbanye n'etiti ụtụtụ, na ike belatara ruo 75% dị ka oghere na ọnụ ọgụgụ ụlọ ntu emeela mgbe ụfọdụ ihe karịrị otu nkwụsị ịga ma ọ bụ ịbanye. Mana, n'ozuzu, a na -ewere itule dị mma.
Na mgbakwunye, na a na -echekwa usoro anticovidic oge niile site n'iji nkpuchi eme ihe n'ime ụlọ. Agbanyeghị, ihe anya ọha anọwo siri ike karị.
Akụkọ - FLM, 25/9/2021
Na 10am enwere otu kwụ n'ahịrị ihe dịka mita 50 karịa ma ọ bụ obere na -eche ịbanye n'ọnụ ụzọ ndịda na ndị na -ege ntị bụ ndị dị iche iche na afọ niile. Naanị otu awa ka e mesịrị ike na -ejuputa vertiginously na ọtụtụ eme ihe - Mgbakọ, mkparịta ụka, akụkọ ihe mere eme… - n'ụlọ ezumike dị iche iche edoziri na etiti etiti. N'ime ya afọ a bụ ihe ọhụrụ nke itinye ọtụtụ ụlọ ntu iji kwụọ ụgwọ maka mbelata ohere, na mgbakwunye na ewepụkwala sentimita n'obosara ụlọ ntu.
N'uche nke m, ma eleghị anya, ọ gaara aka mma n'ụzọ ọzọ: nye, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ohere niile site na mbụ tinyere Paseo de Carros, opekata mpe ntakịrị ihe iji nwee ike idobe ya n'etiti ụlọ ntu ma ghara imechi akụkụ ahụ, dịka o mere ha na mkpagharị etiti. Dị ka ha nwere ike inwe wụnye saịtị mweghachi ndị ọzọ ị haveụ mmanya, n'ihi na naanị na abụọ echeghị m na o nwere afọ ojuju. Na nke tebụl efu ka anyị nwee ike ịnọdụ ala na anyị anaghịdị ekwu okwu. Mana ọ bụ naanị echiche m.
Ahịrị ndị ọzọ
Maka mbinye aka ndị ode akwụkwọ, ka anyị kwuo nke kachasị, ndammana. N'ihi na ụfọdụ nwere atụmatụ nke ọma ịchigharị ha n'akụkụ ndị a na -achịkwa, mana ndị ọzọ ga -enwerịrị oke n'akụkụ nke ọzọ ka ha ghara ịkwụsị nkwụsị nke ndị ọbịa. Na ụfọdụ ka etinyere na ya na etiti. Ya mere mgbe ụfọdụ ọ na -esiri ha ike ịhapụ ma ọ bụ ịgagharị.
Ndị odee, ọnụ ọgụgụ na agwa ndị ọzọ
Esoro m gbadoro ụkwụ na ndị odee kacha amasị m doro anya na dịka mbinye aka nke ubochi. Ọzọkwa doro anya ọ gaghị ekwe omume ịga ma ọ bụ nweta ịhụ na ikele mmadụ niile nke m ga -amasị. Yabụ, na -ewepụta oge n'etiti mbinye aka na ịbịanye aka, agara m na -eme ngosi ahụ ugboro ole na ole.
N'etiti narị otu narị ndị edemede anyị maralarị na enwere amaghi, ntakịrị kasị mara amara, na aha, con jerk na dị ka, ndị na -agafe ihe ọma na ihe ọjọọ. N'ime ndị ikpeazụ, ha nọ ebe ahụ Eduardo Mendoza placeholder oyiyi, Javier Cercas, Ọ bụ Julia Navarro o Santiago Posteguillo, na -enwe ahịrị na -enweghị njedebe nke ndị isi. Achọrọ m iche na ikekwe ha bụ oge a kapịrị ọnụ ma ọ bụ na ọ dabara mgbe m gafere n'ụlọ ntu ha ihe karịrị otu ugboro, mana ọ dọtara uche m na Mendoza, Cercas na Navarro enweghị nkpuchi bịanyere aka n'akwụkwọ na ijere ndị na -agụ akwụkwọ ozi. N'ezie, na maka foto a na -emebu, anyị niile wepụrụ ha ugbu a, mana ọ nyere m echiche na ha abụghị ikpe ya.
Ha nwekwara ọtụtụ ihe ndọpụ Carme chaparro, Elisa Victoria, Rodrigo Cortés, Amarna Miller o Esther gilli. Ma ugbua n'ehihie, n'ime ụlọ mepere emepe na pụrụ iche maka mbinye aka, Elísabet Benavent chịkọtara igwe mmadụ niile.
Njirimara dị ka Dioni ma ọ bụ dị mkpirikpi Íñigo Errejón na Federico Jiménez Losantos.
Mbinye aka m
Ndị m chọrọ. Yabụ muchas Gracias maka obiọma, okwu, ịhụnanya na nraranye nke Domingo Villar, Daniel Martin Serrano, Santiago Diaz, Onyinyechi Chi, Javier Pellicer e Iñaki Biggi. Ọ bụ a obi ụtọ na a ọ joyụ hụ ka ha niile na -eme mmemme ọ bụghị naanị otu akwụkwọ a, mana ka ha nwee ike ime ya ọzọ ihu na ihu.
Mụ na Iñaki Biggi, Domingo Villar, Daniel Martín Serrano, Santiago Díaz, Javier Pellicer na Teo Palacios.
Nụrụ na ụgbọ elu nke nne ma ọ bụ nne nne na -eje ije ka nwatakịrị na -agbagharị na nke ahụ na -achịkọta isi na ọchịchọ Site na ndị ọma niile na -agụ akwụkwọ na anyị nke hụrụ akwụkwọ n'anya n'ozuzu: «Nke a bụ ngosipụta izizi gị. Na ị ga -abịa mgbe niile ».
... nke ahụ bụ ọtụtụ ndị ọzọ, dị ka ọ dị na mbụ ma ọ bụ ka ha kwesịrị ịdị, mana hapụ ha ka ha dịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ihe omume » Akwụkwọ ngosi Madrid. Ọkọ akụkọ njem